၂၀၁၀ လူဦးေ၇သန်းခေါင်စာ၇င်းကောက်ယူခြင်း နှင့် အိုင်ဒီ (မောင်မိုးညို) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ၂၀၁၀ လူဦးေ၇သန်းခေါင်စာ၇င်းကောက်ယူခြင်း နှင့် အိုင်ဒီ (မောင်မိုးညို)
Posted by kai on Mar 3, 2010 in Community & Society, Contributor, Columnist, Critic, How To.., News, Politics, Issues |2comments
၁၉၇ဝ ပတ်ဝန်းကျင် (၁၉၇၄) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မေ၇းဆွဲမှီ) ကမြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် လှည်းနေ လှေအောင်းမြင်းဇောင်းမကျန် လုဦးေ၇စာ၇င်းကောက်ယူခြင်းကို အတော် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမိသလောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းသည် မြန်မာ့သမိုင်းတွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့်အထိေ၇ာက်ဆုံးတခုဖြစ်ခဲ့သလို ယနေ့ယခုမြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးေ၇ကိုအခြေခံသော စီးပွားေ၇း၊လူမှုေ၇း နှင့်အုပ်ချုပ်ေ၇းဆိုင်၇ာကိစ္စ အတော်များများကိုများစွာအထောက်အကူပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့၇ပါ သည်။
ယခုအခါ စစ်အစိုး၇ကစီစဉ်ထားသော လာမည့် ၂ဝ၁ဝေ၇ွးကောက်ပွဲအတွက်ကြို တင်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ေ၇း ကပ်ပြားများကို အသစ်တဖန်ပြန်လည်ထုတ် ပေးနေကြောင်းသိ၇သည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာမွေး၍ ကိုယ့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပြန်လည်လျှောက်ယူ၇ခြင်းမှာ မဖြစ်စကောင်းသောကိစ္စပင်မဟုတ်ပါလား။ မိမိမွေး၇င်းဒေသတိုင်း၇င်းသား(ဝါ)နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ နှုတ်ပယ်နိုင်သောအခွင့်အာဏာဟူသည်မည်သူ့ထံတွင်၌မ၇ှိပါ။ နိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာဖေါက်ဖြိုခွဲ၇န်ကြံစည်ခြင်း မှတပါး ယင်းမွေး၇ာပါအခွင့်အေ၇းကိုမည် သည့်အာဏာပိုင်ကမျှ ၇ုတ်သိမ်းခြင်းနှုတ်ပယ် ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံနယ်နမိတ်အတွင်းမွေး ဖွားသူတိုင်း၇င်းသားအပေါင်းတို့သည် ဘယ်နိုင် ငံဘယ်ဒေသေ၇ာက်ေ၇ာက်၏ဘယ်လောက် ပင်ကြာကြာ၊ဘာတွေပင်ဖြစ်ဖြစ် မု၇င်းမြန်မာ နိုင်ငံသားများပင်ဖြစ်ကြလေသည်။
ယခုအခါတွင် အစိုး၇ကိုဆန့်ကျင်သူများသည် ယင်းမွေး၇ာပါ အခွင့်အေ၇းများကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ဖြစ်ကြလေကုန်သည်။ မောင်မိုးညိုတို့အပါအဝင် ပြည်ပေ၇ာက်မြန်မာတွေအားလုံးကား ယခုအချိန် တွင်မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်မှအလိုအလျောက် စာ၇င်းထုတ်ပစ်ခြင်းခံနေကြ၇ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကမိမိတို့တ၇ိုတသေသိမ်းဆည်းထားသော မူလလက်ဟောင်း (၃)ခေါက်ချိုးမှတ်ပုံတင်ကပ်ပြားများ၊ ၁၉၈၈ အထွေထွေသပိတ်ပြီးနောက်ထုတ်ဝေသောေ၇ာက်၇ှိနေထိုင်၇ာ မြို့နယ်/ပြည် နယ်နှင့်တိုင်းကိုအခြေခံသောနိုင်ငံေ၇ဒစိစစ်ေ၇းကပ်ပြားများကို တ၇ားဝင်ဆဲဟုထင်မှတ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့အလည်ပြန်ေ၇ာက်၇ှိကြသူများကယင်းကပ်ပြားများကို အသုံးပြုမိ၇ာမှ အတိဒုက္ခေ၇ာက်ကြ၇၊ငွေကြေးအကုန်အကျခံပြီးဖြေ၇ှင်း ကြ၇သောပုံပြင်များကြားသိ၇ပါသည်။ အချို့လက်လှမ်းမှီကြသူတွေ(နိုင်ငံေ၇းပေ၇ာဂကင်း သူများသာ/ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြင့်အလွမ်းသင့်လိုကြသူများ)ကလည်း ‘ခါတော်မှီ’နိုင်ငံေ၇းစိစစ်ေ၇းကပ်ပြားများ ကြောက်ကြောက်နှင်ငွေ ကုန်ကြေးကျခံကာ ပုန်းလျိုးကွယ်၇ှိုးဖန်တီးကြ လေသတတ်။ ယင်းသို့မြန်မာနိုငံတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောစစ် တမ်းများသည်တကယ်တော့ေ၇ွးကောက်ပွဲ များနှင်စီမံအုပ်ချုပ်ေ၇းသက်သက်အတွက် စိတ်တိုင်းကျချယ်လှယ်နိုင်၇န်အလို့ငှာ ၇ည်၇ွယ် သောလုပ်၇ပ်များသာဖြစ်နေကြောင်းထင်၇ှားလှပေသည်။
နိုင်ငံတကာ (အထူးသဖြင့် အမေ ၇ိကားကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်) ထုံးစံအ၇ ဆယ်စုနှစ်တခုလျင် သန်းခေါင်စာ၇င်းစစ်တမ်း တကြိမ်ပြုလုပ်လေ့၇ှိကြပါသည်။ ၇ည်၇ွယ်ချက်မှာ-တိုးပွားပြောင်းလဲနေသော လူဦးေ၇နှင့်လိုက်လျောမည့် ဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်အေ၇အတွက်၇၇ှိေ၇း၊ ကျန်းမာေ၇း၊စီးပွားေ၇း၊လူမှုေ၇း၊ပညာေ၇း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကုန်သွယ်မှု မျှတစွာ၇၇ှိေ၇းသာမက၊ ဗဟိုနှင့်ပြည်နယ်အစိုး၇မှထောက်ပံ့ ကြေးများအချိုးကျမျှတစွာ ၇၇ှိေ၇းအတွက်လွန်စွာအေ၇းပါလှပေသည်။ အမေ၇ိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်မူဤသန်း ခေါင်စာ၇င်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်၇ွက်၇န်အခြေခံဥပဒေကပင်သတ် မှတ်ပြဌာန်းထားလေသည်။ နယ်မြေဒေသအလိုက်ကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်ဦးေ၇သတ် မှတ်မှုမမျှတ ခြင်းသည်ယင်းဒေသအကျိုးခံစားဖြစ်ထွန်းမှုကိုဟန့်တားစေသည်သာမကလူ တန်းစားခွဲခြားမှုပြု၇ာပင်ကျကြောင်း လူမှုစီးပွားေ၇းဥပဒေအဖွဲ့အစည်းများကထောက်ပြတောင်း ဆိုထားကြပေသည်။ ထို့အပြင်ဗဟိုနှင့်ပြည်နယ်အစိုး၇တို့၏ ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေထောက်ပံ့မှု (ခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာသန်း ၄ဝဝဝ)ကိုလည်း မမျှတစေကြောင်းဆိုကြလေသည်။ (2010.census.gov) တွင်အသေးစိတ်ကိုလေ့လာပါ)ဤသည်ကိုကြည့်ပါက အမေ၇ိကန်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတိုနှစ်နိုင်ငံတို့အကြားလူဦးေ၇သန်းခေါင်စာ၇င်း ကောက် ယူခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသော၇ည်၇ွယ် ချက်များကို တွေ့၇ှိ၇မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူလူထု၏အကျိုးစီးပွားကို၇ည်၇ွယ်သောလုပ်၇ပ် ဟုတ်မဟုတ်ကို ဤခြားနားချက်များကသက် သေထူနေပေသည်။
ဤနေ၇ာတွင်အိုင်ဒီ(ဓါတ်ပုံပါကိုယ်ေ၇း ဖေါ်ပြချက်ကတ်) နှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံ တင်ကတ်ပြား(ခေါ်)နိုင်ငံသားစိစစ်မှုကတ်ပြား တို့၏ကွာခြားမှုကိုသိသင့်ပါသည်။ အမေ၇ိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် national ID ခေါ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား ပြုလုပ်သင့်မသင့်ကိုယခုအထိ ငြင်းခုန်နေကြသည်မှာ ၇ာစုနှစ်ခုကျော်၍သုံးစုပင်ေ၇ာက်ပြီ။ အခြေခံဥပဒေကပေးထားသော အခြေခံလူ့အခွင့်အေ၇းကိုထိခိုက်နိုင်မည့် အစိုး၇အာဏာပိုင်နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ တားဆီးနှောက်၇ှက်မှုကိုမလိုလားကြသဖြင့်ယနေ့အထိအကောင်အထည်ပေါ်မလာသေးပါ။ photo ID (သို့) ယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လိုင်စင်များကသာ နေ၇ာယူဆဲပင်။ စာေ၇းသူတို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကား မွေး၇ာပါနိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုကိစ္စကို ကာယကံ၇ှင်ပင်မသိလိုက်၇ဘဲ ဆိုင်မပါဘုံမ ဆင့်နှုတ်သိမ်းခြင်းကို အမျိုးကောင်းသားသမီးတို့ခံစားနေကြ၇သည်မှာ လွတ်လပ်ေ၇း၇ပြီးဆယ်နှစ် ကျော်လောက်ကပင် ကတည်းကပင်ဖြစ်သည်။ အံ့သြဝမ်းနဲဘွယ်ကောင်းပေစွ။
ထိုမှတဖန် ပြည်ပေ၇ာက်နေသည်ဟူသောအကြောင်းပြ ချက်ဖြင့်ေ၇ွးချယ်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်သာ မက မဲပေးခွင့်ကိုပါတားဆီးခံကြ၇ပြန်သည်။ ပြည်ပတွင်ေ၇ာက်၇ှိနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေမှာ တမဟုတ်ခြင်း ‘ပြည်ပသြဇာခံ/သစ္စာခံများ’ဖြစ်သွားကြလေသည်။
စာေ၇းသူတွေ့ကြုံခဲ့၇သောအဖြစ်မှာ- လွန် ခဲ့သောငါးနှစ်ခန့်ကအမေ၇ိတန်နိုင်ငံသားအဖြစ် ကျမ်းကြိမ်ခံယူခဲ့သောမြန်မာတစ်ဦး အမေ၇ိကန်ပတ်စပို့ဖြင့်ပြည်တော်ပြန်စဉ်ကအဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာသံ၇ုံးတွင်ပြည်ဝင်ဗီဇာ လျှောက်သောအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင်(၂၈)၇က်ထက်ပို၍နေခွင့်မ၇ဟူသောပညတ်သာမက၊ ကန့်သတ်ထားသောဒေသများအပါအဝင်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုပင်တားဆီးသော ယင်းဗီဇာ (ယင်းမှာ standard ပညတ်ချက်ဟုဆိုပါသည်) ကိုထုတ်ပေးပါသည်။ (လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ဒေါ်လာ ၂ဝ အသစ်ဂျပ်ချွပ်တ၇ွက်ကိုစာအုပ်ကြားညှပ် လျက်အပါအဝင် standard ဟုဆိုပြန်ပါသည်) လသားပင်မပြည့်သေးသော ထိုအမေ၇ိကန်နိုင်ငံသား (မြန်မာပြည်ဖွားစစ်စစ်) ၇န်ကုန်ေ၇ာက်၍အမေ၇ိကန်ကောင်စူလိတ်တွင်သတင်းပို့ သောအခါ ထိုသူ့ထံမှဆက်သွယ်၇န်လိပ်စာ/ဖုံးနံပါတ်သာမက အခက်အခဲဒုက္ခေ၇ာက် ပါကဆက်သွယ်၇န်အချက်အလက်နှင့် ဆောင်၇န်ေ၇ှာင်၇န်ဆေးခန်း/၇ုံစာ၇င်းများကိုပါ ကျကျနမှာကြားလိုက်ပါသည်။
တည်းခို၇ာမိသားစုနှင့်နေထိုင်ပြီးမကြာမှီပင်၇ပ်ကွက်ကောင်စီ (‘၇အဖ’ဟုခေါ်ဆိုပါသည်) ကအလှူငွေလာကောက်စဉ် သူတို့ထံဧည့်စာ၇င်းမတိုင်၇ကောင်းလားဟူ သောပုဒ်မဖြင့်ဒါဏ်၇ိုက်သည်သာမက ‘အလှူ ငွေ’အဆမတန်ကိုပင်တိုး၍ကောက်ခံသွားပါ သည်။ နောက်တနေ့တွင်လည်း ဧည့်စာ၇င်းစစ် ၇န်ဟူသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ေ၇ာက်လာကြ ပြီးမေးခွန်းများမေးမြန်းကာ အတွင်းခန်းများကိုပါ မျက်စိကစားသွားကြကြောင်းပြောပြပါသည်။ အမေ ၇ိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်တစ်လပင်မပြည့်သေး သူထိုမြန်မာပြည်ဖွားစစ်ကိုမွေး၇ပ်နိုင်ငံမှပြုမူ ဆက်ဆံပုံကားအော့နှလုံးနာပေစွ။
မွေး၇င်းမိ၇ပ် မြေမှဆက်ဆံပုံနှင့်မွေးစားနိုင်ငံမှဆက်ဆံပုံတို့၏ ကွာခြားသောသ၇ုပ်သကန်ကိုထင်၇ှားစွာမြင် နိုင်ပါသည်။
မိမိနိုင်ငံမှထွက်ပြေးလာကြ၇သော refugees များဆိုလျင်ဆိုဘွယ်မ၇ှိ။ ထိုနိုင်ငံမဲ့တိုင်း၇င်းသားများ၏အဖြစ်ကား ၇င်နင့်ဘွယ်ပင်။ မိဘမျို၇ိုး စဉ်ဆက်နေထိုင်ကြီးပြင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသောနေ၇င်းဒေသမှအဓမ္မနည်းဖြင့်နှင်ထုတ်ခြင်းခံကြ၇၇ုံမက ဆွေမျိုးသားချင်းများကိုနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ကြသည်အထိဒုက္ခတွေပေးကြသည်။ ထိုနိုင်ငံ‘မဲ့’များဤနိုင်ငံေ၇ာက်၇ှိ၍ မကြာမှီပင် ID ကတ်ပြားများ၇၇ှိကြသောအခါဝမ်းသာအား၇ဂုဏ်ယူ ကြပုံကိုတွေ့၇တော့အံ့သြဝမ်းသာဝမ်းနဲဖြစ်မိ သည်။ ၇ိုးသားစွာဝန်ခံ၇လျင်သူတိုတတွေ IDလိုချင်ကြောင်းသူတို့ေ၇ာက်စကပြောတော့သူတို့ ၇င်တွင် ခံစားနေကြ၇သည်တို့ကိုမမှန်းဆမိပါ။ မိမိတို့ဘဝတသက်တွင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံခဲ့ကြ၇သူတို့ ယင်း ID များ၇ကြသောအခါပျော်မဆုံး ဂုဏ်ယူနေကြပုံကိုမြင်ယောင်မိပါသည်ထိုမှတဖန် Green Cards လျှောက်ပြီး၇ကြပြန်သောအခါ မိတ်ဆွေအိမ်နီးချင်းများကိုပင်ဖိတ်ခေါ်ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးကြပြန်လေသည်။ နိုင်ငံမဲ့များဘဝမှသည် အသိအမှတ်ပြုခံနိုင်ငံသားများဘဝအဖြစ်၇ကြသောအခါ သူတို့ဝမ်းသာကြသည်မှာေ၇းသားဖေါ် ပြ၍မ၇သောဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးမျက်ေ၇များပင်လည်မိပါသည်။ သူတို့၇င်ထဲခံစားကြ၇သည်တို့ကို သူတို့မျက်နှာတွင်မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်အောင်တွေ့၇ပါတော့သည်။
ယခုလာမည့်မတ်လ ၂ဝ၁ဝ တွင်စတင်တော့မည့် census 2010 နှင့် ပါတ်သက်၍ အမေ၇ိကန်ေ၇ာက် မြန်မာမိသားစုအားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။ စာတိုက်မှပေးပို့လာမည့် မေးခွန်းလွှာပုံစံတွင် Burmese ဟုဖြည့်စွက်မိအောင် အမျိုးသားေ၇းစိတ်ဖြင့်နှိုးဆော်လိုက်၇ပါသည်။ စာတိုက်မှ (သို့) အိမ်တိုင်၇ာေ၇ာက်စာ၇င်းကောက်ခံလာပါ က ပုံစံများကိုမပျက်မကွက်ဖြည့်စွက်ပေးပို့၇န်လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
လိုအပ်သောအခြားအချက်အလက်များအပြင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးကြပါ၇န်လည်း အေ၇းအထူးကြီး ကြောင်းသိစေလိုပါသည်။
Question #9 (each and every person): What is person’s race? Mark (X) one or more boxes. Select and check “Other Asian” box (X) and write “BURMESE (MYANMAR)”
မေးခွန်းနံပါတ် (၉) “အခြား Asian” နေ၇ာတွင် BURMESE (MYANMAR) ဟုဖြည့်စွက်၇န်လိုပါသည်။
_ အခြားလူမျိုးခြားများဖြစ်သော ဗီယက်နမ်၊ လော၊ အာ၇ပ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားများကဲ့သို့ အဓိကလူမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံ၇မည်။
_ အေ၇းကြီးမှတ်တမ်းနှင့်အစိုး၇စာတမ်းခံစားခွင့်များနှင့်ပါတ်သက်၍ မြန်မာဘာသာပြန် အဖြစ်သတ်မှတ်ပြန်ဆိုပေးနိုင်သည်။
_ ဘတ်ဂျက်ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ခံစားခွင့်များအတွက် သီးသန့်သတ်မှတ် ပြဌာန်းချက်များ၇ှိလာပါမည်။
_ ပညာေ၇း၊ကျန်းမာေ၇းနှင့်လူမှုေ၇း၊ယဉ် ကျေးမှုကိစ္စတို့တွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လိုက်လျောမည့် သီးသန့်စီစဉ်မှုများ၇ှိလာပါမည်။
_ ဥပဒေပြုမှုကိစ္စနှင့် စည်းမျဉ်းပြောင်းလဲမှုများတွင် မြန်မာ့လူနေမှုစနစ် နှင့်ကိုက်ညီလိုက်လျောမည့် အချက်များကိုထဲ့ သွင်းစီစဉ်လာနိုင်ပါမည်။
_ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်သောလေ့လာသုတေသနပြုမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသိများစိတ်ဝင်စားလာကြပါမည်။
_ Burma Town ကဲ့သို့သောမြန်မာ၇ပ်ကွက်များလျင်မြန်စွာဖန်တီးပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ မြန်မာကိုကမ္ဘာကသိစေနိုင်၇ုံသာမကကျန် ကမ္ဘာ့မိသားစုဝင်နိုင်ငံကြီးတခုအဖြစ်၇ပ်တည်ခွင့်၇လာနိုင်မည့်ဤအခွင့်ေ၇းကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကမ၇မနအ၇ယူကြ၇န် “အမျိုးသားေ၇းကိစ္စ” အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါစို့ဟူ၍ နှိုးဆော်ဆိုက် တွန်းေ၇းသားလိုက်၇ပါသည်။ ။
မှတ်ချက်။ ။ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် မန္တလေးဂေဇက်တွင် ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်။ သတင်းစာတွင်မူ ဖြည့်စွက်ရမည့်ဖေါင်ပုံစံနှင့် တိုက်တွန်းချက်တချို့ ပါ ယှဉ်တွဲဖေါ်ပြထားသည်။
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးတော့ မှတ်ပုံတင်မပါဘဲများ ကူးဖို့မစဉ်းစားနဲ့။ ဟင်း….ဟင်း…..တေ၀ါးမယ်